Gole la rabay in dalka laga tirtiro oo xildhibaano cusub lagu daray - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Gole la rabay in dalka laga tirtiro oo xildhibaano cusub lagu daray
Waxa maanta ay ansixiyeen golaha barlamaanku in gobolka Banaadir matalaad laga siiyo waxa loogu yeero aqalka sare oo ah goob si xaaraana loogu cuno cashuurta laga qaado hooyada yaanyaanada gada. Waxay isla garteen in 13 xildhibaan oo loo bixiyay magaca aan la garanayn ee Sinaytar oo Maraykanka laga soo koobi gareeyay golaha loogu daro.
”Nasiib darada haysata dadka masaakiinta ah ee cashuurtan laga qaado ayaa ah in la sii kordhiyo xildhibaano ku sheega fadhiga ku jaqaya lacagta hooyadaas subaxa kalahaysa ay bixiso ayuu yiri Cali Calasow.
Farmaajo maxay uga dhigan tahay
Madaxweynaha isaga waxay uga dhigan tahay inuu iska aamusiiyay qawlaysato qabiili ah oo rabay inay caasimada qaranka isa siiyaan kuna helaan kuraas dheeri ah laakiin taasi ma dhicin ee waxa lagu qaybiyay nidaamka xaaraanta ah ee 4.5, marka waxa dhan ayaa xaaraana ayuu yiri Cali Calasow.
Waxa durba socda sidii jufooyinku u qaybsan lahaan kuraastaas lagu cunayo xoolaha masaakinta fadhiga.
Ilaa hadda ma jiro siyaasi Soomaali ah oo xal waara oo dawladnimo adag lagu helayo keena dalka aan ka ahayn inay culeys sii saaraan shacabka Somaliyeed ayuu yiri Xuseen Warsame.